Waxaa La Iga Hubiyay In Aanan Waalnayn- Xiddigo Premier league Ah Oo Soo Bandhigay Arin Qariib Ah. - Gool24.Net
Waxaa La Iga Hubiyay In Aanan Waalnayn- Xiddigo Premier league Ah Oo Soo Bandhigay Arin Qariib Ah.
May 17, 2019 Saed Balaleti
Danny Rose iyo Peter Crouch ayaa si furan uga hadlay khibradooda la xiriirta cudurada dhimirka iyadoo isbuucaan lagu jiro wacyigelinta cudurada dhimirka.
Daafaca Tottenham iyo England Danny Rose ayaa shaaca ka qaaday in koox cusub oo ku biiri rabay ay ku tilmaamtay inuu waalan yahay madaama uu qabay isku buuq (depression), halka weeraryahankii hore ee Liverpool iyo England Crouch ayaa qirtay inuu habeenkii ooyi jiray madaama uusan ku qanacsaneyn qaabka jirkiisa.
Labadaan ciyaaryahan ayaa qeyb ka ah dukumiintiri looga hadlayo cudurada dhimarka oo ay ka qeybgalayaan tababaraha England Gareth Southgate, weeraryahankii hore ee Arsenal Thierry Henry iyo xiddigii hore Spurs Jermaine Jenas.
Dukumiintirigaan oo lagu magacaabo ‘A Royal Team Talk: Tackling Mental Health’ ayaa waxaa laga sii deyn doonaa BBC One maalinta Axada.
Rose ayaa qeyb ka ahaa xulka England ee gaaray semi-finalka Koobka Adduunka xagaagii hore ka hor inta uusan ka caawinin Spurs inay gaaraan finalka Champions League horaantii bishaan.
Si kastaba, daafaca bidix ayaa aaminsan in kubada cagta ay weli wado dheer u soo jirto sida ay u la dhaqmaan cudurada dhimirka.
Danny Rose ayaa shaaca ka qaaday inuu isku buuqsanaa (depression) ka hor Koobkii Adduunka ee sannadkii hore taasoo uu sheegay inay sabab u aheyd dhaawac iyo musiibo qoys oo isku biirsaday.
Waxa uu xanuunkiisa dhimirka uu ka sheegay wareysi uu bixiyay waxaana ku amaanay amiirka boqortooyada Ingariiska Prince William.
Si kastaba, Rose ayaa sheegay in ka hadalkiisa xanuunkiisa dhimirka inay mar kale noqotay mid laga wadahadalo xagaagii ku xigay.
“Waxaan la hadlayay koox kale xagaagii, waxaana ay igu yiraahdeen, ‘kooxda ay jeceshay inay kula kulanto, si ay u hubiyaan inaadan waalneyn’ waxaana ugu wacan wixii aan iri iyo waxaan soo maray” ayuu yiri Rose.
“Waan ceebsaday, madaama wax walba aan soo maray aysan saameyn ku yeelanin shaqadeyda.
“Weli aan ogahay inaan boqolkiiba 100 siin doono shaqadeyda.”
Heshiiskaas uu ku wareegi lahaa Danny Rose ma uusan dhaqangelin laakiin 28 jirkaan ayaa weli ka careysan in dadku ay ku fekeraan inuu waalan yahay.
Waxa uu hadalkiisa raaciyay: “Haddii ay fursadaas soo baxdo mar kale, dabcan waan diidi doonaa.”
Weeraryahan Peter Crouch oo 108 gool ka dhaliyay Premier League 468 kulan uu saftay ayaa ah xiddig dheer oo aad caato u ah, waxaana uu sheegay in markii uu yaraa ay dhibaato weyn ku aheyd.
“Markii aan qeyb ka noqdo kooxda koowaad ee QPR waxay dadku igu garsoori jireen muuqaalkeyga” ayuu yiri Crouch. “Dhererkeyga waa isla sidii malaha waan ka caateysnaa sida aan haatan ahay.
“Inkastoo haatan aysan waxba ila aheyn islamarkaana aan ka kaftamo, hadana marka aad yar tahay aad ayay ku dhibayaan waxyaabahaan.
“Waan ooyi jiray mar walba. Habeenkii ayaan ooyi jiray markii aan 14, 15 sanno jir ahaa, waxaana dhihi jiray: “Aabi waa maxay sababta aanan ugu ekeyn sida qof walba?’
“Taageerayaasha kubada cagta waxa ay noqon karaan kuwa aan naxariis laheyn.”